सिईडिबि हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्नुभयो ? आज अन्तिम दिन | Notebazar
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्नुभयो ? आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौं। २१बैशाख, २०७८, मंगलवार / May 04, 2021 09:10:am
सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिने मंगलबार (आज) अन्तिम दिन रहेको छ ।
सिईडिबिको आइपीओमा १७ लाख ३६ हजार आवेदन, ११.२५ गुणा माग2days ago
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आइपीओमा १५ लाख आवेदन, रेकर्ड ब्रेक होला ?3days ago
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आइपीओमा १२ लाख बढी आवेदन4days ago
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आइपीओमा पहिलो दिन करिब ३ गुणा आवेदन5days ago
सिईडिबि हाइड्रोपावरको २५ करोडको आईपीओ खुल्यो, कति भर्ने ?6days ago
सीइडीबी हाइड्रोपावरको साधारण शेयर शुक्रबारदेखि निष्काशन हुने 1 week ago
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आईपीओ बैशाख १७ गतेदेखि 21/04/2021
पच्चिस करोड १८ लाखको आइपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति 15/04/2021